Qarax Gaari Lagu Gubay Oo Ka Dhacay Gobalka Bari. – Bogga Calamada.com
Qarax Gaari Lagu Gubay Oo Ka Dhacay Gobalka Bari.
Wararka ka imaanaya Gobalka Bari waxey sheegayaan in qeybo ka mid ah gobalkaasi qarax lagula beegsaday gaari ay la socdeen maleeshiyaatka maamul gobaleedka daba dhilifka ah ee Puntland.
Qaraxa oo loo adeegsaday Miinada dhulka lagu aaso ayaa si gaar ah kaga dhacay wadada isku xirta deegaanka Galgala iyo magaalada Boosaaso ee xarunta Gobalka Bari’iyadoona warar hor dhac ah laga helayo qaraxaasi.
Miinada ayaa haleeshay oo la kacday gaari Cabdi Bile ah oo ay la socdeen maleeshiyaatka maamulka Ashahaado la dirirka Puntland,taasi oo burburisay gaariga Cabdi Bilaha sidoo kale qaraxa waxaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday maleeshiyaatkii la socday gaariga ay miinada burburisay.
Dhowr jeer wadada isku xirta magaalada Boosaaso iyo deegaanka Galgala waxaa ka dhacay qaraxyo culus kuwaasi oo maamulka dowlada Xabashida Itoobiya dhisatay Ee Puntland uu ku waayay saraakiil,askar iyo gaadiid dagaal oo aad u fara badan.